တင်အတုအစစ်ကိစ္စကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ စုလှိုင်ဝင်း
October 29, 2017 myanmarnine Leaveacommentအနုပညာရပ်ဝန်း
ယခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မြန်မာဆန်တဲ့ ၀တ်စုံနဲ့ ကိုယ်လုံးအလှဗီဒီယိုကြောင့်နာမည်ကြီးနေတဲ့ မော်ဒယ် စုလှိုင်နှင်း မှာ အားပေးဝန်းရံသူတွေ တခဲနက် ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပရိသတ်တွေကြားမှာ သူမရဲ့ တင် ဟာ အတုလား အစစ်လားဆိုတာ အငြင်းပွားနေကြပြန်ပါပြီ ။ myanmarcelebrities ရဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူမရဲ့ တင်အတုလားအစစ်လားဆိုတာကို အခုလို ရှင်းပြသွားပါတယ်။ စုလှိုင်ဝင်း လို့ လူသိများသွားစေခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို credit—-thadinatin.org
myanmarnine Leaveacommentအနုပညာရပ်ဝန်း
October 28, 2017 myanmarnine Leaveacommentအနုပညာရပ်ဝန်း
October 27, 2017 myanmarnine Leaveacommentအနုပညာရပ်ဝန်း
Twe Tar Cho Beach Style Photoshoot
ချစ်သူ ကို စစ်ကြေညာ လိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
သူမ ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေါ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတစ်ယောက် ချစ်သူ ကို စစ်ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ် ပေါ်မှာ ရေးသားလိုက်တာပါ။ ပိုင်ဖြိုးသု စစ်ကြေညာ လိုက်တာကတော့ “ရင်ဘက်ထဲကဓါး” ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကို 1st Day 1st show ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီး ပူဆာ လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြည့်ရရင်တော့ ဝက်ဝက်ကွဲ စိတ်ကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ ကြိုတင် စစ်ကြေညာ လိုက်တာပါ။ “သို့ သက်ဆိုင်သူ မနက်ဖြန် နေ့တစ်ပိုင်း သုသု မ အားသည်…. “ရင်ဘတ်ထဲကဓါး” 1st day 1st show ကြည့်ချင်သည်… လက်မှတ် ရအောင် ဝယ်၍လိုက်ပြပါ…. မကြည့်ရလျှင် ဝက်ဝက်ကွဲ စိတ်ကောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း […]
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ရေနံချောင်းကဖေကံကောင်း ဟာသ video
October 26, 2017 myanmarnine Leaveacommentအနုပညာရပ်ဝန်း
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ရေနံချောင်းကဖေကံကောင်း ဟာသ video လေးကို ကြည့်သူတိုင်းထာဝရ ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ ရေနံချောင်းကဖေကံကောင်း ဟာသ video credit–thadinatin.org
တောင်သမန်အင်း ရဲ့ကဗျာ တင်ပေးလိုက်ပြီနော် အဆင်ပြေမယ်ဆို Share ပြီးအားပေးအုန်းဗျို့ လို့ဆိုတဲ့ မနော
ညချင်းတွင်းပေါက်သွားတဲ့ မနောရဲ့ MTV သီချင်းသစ် တောင်သမန်အင်း ရဲ့ကဗျာ ဗီဒီယိုကြည့်ရန်
October 25, 2017 myanmarnine Leaveacommentအနုပညာရပ်ဝန်း
မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ fb ပေါ်မှာ ဗီဒီယိုဖိုင်အသစ် တင်လိုက်ပါတယ်။ ကြာချိန်ကတော့ (၃)စက္ကန့်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ သင်ဇာက အနက်ရောင် sexy ကျကျ ၀တ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး မှန်ရှေ့မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ။ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအနေနဲ့ကတော့ ငွေဆောင်ကို K Resort ပြက္ခဒိန်ရိုက်ဖို့ သွားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုတော် အားတီရဲ့ Music Video အတွက်လည်း ရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ credit–shwemom
October 21, 2017 myanmarnine Leaveacommentအနုပညာရပ်ဝန်း
ရွှေအိမ်စည် က ဘာမှမပြုပြင်ထားပါဘူး ၊ မွေးကတည်းက ဒီဘော်ဒီပေါ့နော် ။ ပြိုင်ပွဲစပြိုင်ကတည်းက ယခုချိန်ထိ ပရိသတ်ကို ပြုပြင်မယ်လို့ လည်းမပြောဖူးဘူး ။ ပြုလည်း မပြုပြင်ထားဘူး ။ ဆက်ပြီးလည်း ပြုပြင်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့Myanmar Celebrity မီဒီယာ ရဲ့ အမေးကို ဖြေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Miss Grand Myanmar 2017 ကို မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ၀င်ပြိုင်မယ့် ရွှေအိမ်စည် ဟာ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံမှာ သွားရောက်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူမ ရဲ့ အလှဓာတ်ပုံတွေကို ပပ၀တီ ပရိသတ်ကြီးအတွက် စုစည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ရေကူးဝတ်စုံ နဲ့ ပြိုင်ပွဲအတွက် ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ် […]